यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा लामो लिं@ग् भएका रोबर्टो, स@म्भोग गर्न खोज्दा डराएर महिला भागिन ! – Halkhabar kura
२१ माघ २०७६, मंगलवार २२:५६
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा लामो लिं@ग् भएका रोबर्टो, स@म्भोग गर्न खोज्दा डराएर महिला भागिन !
मेक्सिकोको साल्टिल्लोमा बस्ने रोबर्टो इस्क्विभेलको लिं”ग १८.९ इन्च लामो हुनुका साथै ९ सय ग्राम तौलको छ उनी विश्वमा सबैभन्दा लामो लिं”ग भएका पुरुष हुन्, जसको लिं”ग झण्डै आधा मिटर लामो छ । त्यो भिमकाय लिं”गको कारण उनको यौ”नजीवन मात्र होइन सामान्य दैनिकी समेत कष्टप्रद बनिरहेको छ । तर उनी शल्यक्रिया गरेर लिं”गको उपचार गरी साइज घटाउन चाहँदैनन् । लिं”गको साइज घटाउनु भन्दा बरु पो’र्नस्टार बन्ने चाहना उनको छ ।
डाक्टरहरुले उनको लिं”गको साइज घटाउन र सामान्य रुपमा यौ’नसम्पर्क गर्नसक्ने हुनका लागि सर्जरी अनिवार्य रहेको बताएका छन् तर उनलाई यो मन्जुर छैन । उनी भन्छन्, ‘म यहीँ लिं”गकै कारण दुनियामा चर्चित छु । म मेरो यौ”नांगबाट खुसी छु, किनकि मेरो जत्रो दुनियामा कसैको छैन ।’
उनको त्यो भिमकाय लिं”गले धेरै स्वास्थ्य समस्या पनि निम्त्याएको छ र रातको समयमा सुत्नका लागि उनको लिं”गलाई छुट्टै सिरानीको आवश्यकता पर्दछ । उनको असामान्य यौ”नांगकै कारण उनले यौ”नसम्पर्क गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘यो यति मोटो छ की मैले कहिल्यै छिराउन सक्ने कुरै भएन ।’
यद्यपि उनले दुईपटक से”क्सको प्रयास गरेका रहेछन् । उनले पहिलोपटक यौ”नकार्यको प्रयास गरेकी महिलाले उनको लिं”ग देख्ने बित्तिकै डराएर भागेकी रहेछिन् । दोश्रो महिलाले भने यौ”नसम्पर्क सुरु गर्दैमा निकै पीडा भएपछि रोक्न बाध्य पारिन् ।
उनलाई एउटा पो’र्नकम्पनीले उनको लिं”गको शल्यक्रिया गरेर साइज घटाउनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने बचन दिएको थियो । तर साइज घटाउनुको साटो आफूले आफूसँग यौ”नसम्पर्क गर्नसक्ने महिला खोजिरहेको बताए । बरु आफुलाई पो”र्नस्टारको रुपमा काम दिन उनले उक्त पो”र्नकम्पनीसँग आग्रह गरे ।
दुनियाकै लामो लिं”ग भएका रोबोर्टोलाई मेक्सिकोको सरकारी निकायले हालै अ”पांगताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । जस अनुसार उनले अन्य अपांग सरह सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
दुनियाकै लामो लिं”गधारीको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाउने चाहना रोबर्टोको छ । तर गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्ले आफूलाई चिन्दै नचिनेको उनको गुनासो छ । आफू अब यहीँ लिं”गका साथ बाँकी जीवन अमेरिकामा गएर बिताउन चाहेको उनी बताउँछन् । अमेरिकामा धेरै महिला रहेको र ती मध्ये एकजना त पक्कै आफुसँग साइज मिल्ने उनको विश्वास छ ।
Previous भारतको राजस्थानमा १४ करोडको राँगो भेटिएपछि
Next लण्डनमा सौता बनेकी आमाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा छोरी